IHLEHLELE UNYAKA OZAYO EYAMA OLYMPICS – Sivubela intuthuko Newspaper
Ihlehlele unyaka ozayo Olympics
IMIDLALO enesasasa emhlabeni jikelele ama-Olympics nabezosingathwa idolobha iTokyo ezweni laseJapan kulonyaka agcine ehlehlisiwe ngenxa yombhedukazwe wegciwane iCorona Virus ehlasele umhlaba wonke.
Le midlalo ehlanganisa imidlalo enhlobonhlobo bekulindeleke ukuthi iqale ngenyanga uNtulikazi ize iphothulwe ngoNcwaba kulonyaka kodwa konke lokho kushabalele ngenxa yaleli gciwane eselibulele inqwaba yabantu emhlabeni jikelele.
Phambilini ikomti elihlela lemidlalo belilokhu limile ekutheni lemidlalo izoqhubeka njengoba isizosingathwa ngonyaka ozayo kusukela ngesikhathi esifanayo.
Kwisitatimende esikhiswe ikomiti lale midlalo sibalule ukubeka phambili izimpilo zabadlali nawo wonke umuntu ozobe eyinxenye yalemidlalo.
“Abaholi bavumelene ngokuthi kulesimo esibhekene naso kungancono imidlalo ihlehliselwe unyaka ozayo ngenxa yokubeka izimpilo zabadlali phambili. Le midlalo isazoqhubeka ibizwe ngama-Olympics futhi izobuyela kulo izwe laseJapan,” kusho isitatimende seKomiti elihlela lemidlalo.
Kungokokuqala ukuthi lemidlalo ihlehliselwe komunye unyaka Kanti umengameli weKomiti uYasuhiri Yamashita ucashunwe ethi babone kufanele ukuba le midlalo bayimise emva kokuxoxisana nomengameli wakulelizwe uShinzi Abe.”Siphatheke Kabi ukuthi asikho isixazululo esiqhamuke naso kulesimo esithinta umhlaba wonke esibhekene naso,” esho.
ama-Olympics eminye yemidlalo emikhulu emhlabeni jikelele nenesasasa kubadlali abangaphezulu kuka-11 000 abasuke bebambe iqhaza abasuka kumazwe alinganiselwa ku-206.
Imidlalo elandelayo yama-olympics izosingathwa eBeijing winter games ngonyaka ka-2022, ilandelwe iParis Summer Games ngonyaka ka-2024 bese kuthi ngonyaka ka-2026 Kube iWinter Games in Milan e-Italy.